I-Chrome 64 iya kukuvumela ukuba uthulise iividiyo ezidlala ngokuzenzekelayo | Iindaba zeGajethi
Inyani yile yokuba ukwazi oko sikulungiselelwe nguGoogle ngohlobo olulandelayo lwe-Chrome-inombolo 64-sijonge phambili ekufumaneni izandla zethu kuyo. Kwaye oko kukuthi, ukusuka kwiNtaba yokujonga, basebenze iinyanga kangangexesha lokuba bakwazi ukunika umsebenzisi a ukhetho 'lokuthula' ukudlala iividiyo ngelixa ukhangela amaphepha e-intanethi.
Kwaye akukho nto icaphukisayo kunokuba uvule iithebhu ezahlukeneyo kwaye kuyenzeka ukuba ugxile ekufundeni isicatshulwa kwaye iaudiyo yevidiyo edlalwa kwenye ithebhu ngequbuliso iyakuhlasela. Kwakhona, enye yeemeko ezingonwabisiyo kukonwabela ijelo le-YouTube kwaye iaudiyo evela kwenye ividiyo igqitha umxholo ongaphambili.
Ewe, nangona iseku-beta, I-Chrome 64 inomsebenzi oza kuwuthanda ukuba ungomnye wabo bathiye ezinye zeemeko ezingentla. Kuyabonakala ukuba, nguwe oya kuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuba ezinye iividiyo zidlalwe ngokuzenzekelayo okanye hayi nakweyiphi na iwebhusayithi oyindwendwelayo. Kodwa ungayilungisa njani? Ewe, ngendlela elula kakhulu.
Inketho iya kubekwa kwelinye lamacandelo kwisikhangeli esisisebenzisa kakhulu. Ngokuchanekileyo, ibha yedilesi. Kodwa xa uqala nje akuyi kubakho nto intsha. Njengoko kuphawuliwe ku SlashGear, ukhetho luya kufumaneka kwi uphawu oluvaliweyo oluhlaza (kwimeko yamaphepha anesatifikethi se-SSL okanye iiwebhusayithi ezingaphantsi kuka "https"), ngelixa iiwebhusayithi zingenaso esi satifikethi (iwebhusayithi phantsi kwe "http") ukhetho luya kufumaneka ngokunqakraza i «i» icon.
Ukucofa zombini ii icon Imenyu iya kuboniswa apho, ukujonga ngaphezulu kokukhetha, kuya kuvela enye ebhekisa kwisandi sale webhusayithi. Ukuba sikhubaza umsindo wewebhusayithi, ukhetho lwethu luya kubhaliswa kwaye luya kusetyenziswa kutyelelo lwexesha elizayo. Ukuba ufuna ukuzama olu khetho, ungayenza ngokukhuphela Inguqulelo ye-beta Chrome 64.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Chrome 64 iya kukuvumela ukuba uthulise iividiyo ezidlala ngokuzenzekelayo